ओलिको कदम अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुस र जनभावना बिपरित छ - समर्थन गर्न सकिन्न : नगर सचिव दङगाल - Baikalpikkhabar
ओलिको कदम अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुस र जनभावना बिपरित छ – समर्थन गर्न सकिन्न : नगर सचिव दङगाल
काशिनाथ दङगाल नेकपाको राजनितीमा चिनिएको नाम हो। इटहरी निवासी दङगाल हाल नेकपा इटहरी माहानगर समितीको सचिब छन । अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीको सचिब बाट आफ्नो राजनीतिक जिविन सुरु गरेका दङगाल पार्टीले दिएका विभिन्न तहका जिम्मेवारी सफलतापुर्वक निर्वाह गर्दै हाल नेकपा इटहरी नगर कमिटीको सचिब जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाकिरहेका छन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच एकता भएपछि पार्टीको नगर सचिबको जिम्मेवारी दङगालको काधमा आएको थियो ।
अहिले नेकपा बिभाजनको संघारमा पुगेको छ । देशभर नेकपाका विभिन्न तहगत समितीहरुका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलिपक्षमा लाग्ने कि प्रचण्ड – माधव पक्षमा लाग्ने भन्नेमा रस्साकस्सी चलिरहेका बेला इटहरीको सिङ्गो नगर समिती भने र माताहतका सबै वडा समितीहरु प्रचण्ड – नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका छन ।
प्रस्तुत छ नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भिम आचार्यका निकट मानिने दङगालसंग नेकपाको बर्तमान फुटको अवस्था लगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर बैकल्पिक खवरकालागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाको पछ्ल्लो राजनीतिको घटनाक्रम लाई कसरी लिनु हुन्छ ?
– नेकपाको पछिल्लो राजनीतिको घटनाले आम नेपाली जनतालाई निराश बनाउने बाहेक अरु केही गरेको छैन । ब्यक्तिगत रुममा भन्दा नेताहरुले जनताको यत्रो आसा र भरोसाको अभिमत लाई यसरी अपमान नगरेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।
यो पार्टी बिभाजनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा इटहरी नगर कमिटी चै कहाँ छ ।
– इटहरी नगरसमिती पहिला जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ ।हामी कोही पनि जनतमतको अपमान गर्नेहरुको पक्षमा छैनौ । हामी सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संबैधानिक सर्बोच्चताको पक्षमा छौ ।
अलिक प्रष्ट भन्नुस न ? तपाई प्रचण्ड – नेपाल पक्षमा कि प्रधानमन्त्री ओलिको पक्षमा ?
– मैले प्रस्टै भनीसके त हामी हिजो जहाँ थियौ आजपनि एकमतका साथ त्यही छौ । हामीले प्रष्ट सङ भनेका छौ कि प्रधानमन्त्रीको कदम असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ।ब्यक्तिगत रूपमा भन्नू पर्दा म यस्तो गलत ,अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको कदापि समर्थन गर्न सक्दिन ।किनभने जनताले नेकपा लाई पुर्ण कार्यकाल स्थिररूपमा सरकार संचालन गर्नका लागि मत दिएका थिए । जनताका आधारभुत आवस्यकता पूरा गर्दै बिकास र समृद्धिको दिशामा अगाडी बढनु पर्नेमा यस्तो हर्कतको कुनैपनि मानेमा समर्थन गर्न सकिदैन ।
निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश लिनेकुरा कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ?
– कुरा त्यो होइन , प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको संबैधानिक आधार के हो भन्ने मुख्य कुरा हो? संविधान बिपरित लोकतान्त्रिक परिपाटी लाई खिल्ली उडाएर गरेको निर्वाचनको के अर्थ ? हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाबको घोषणा त गरेकै थिए नि तर किन त्यो सफल हुन सकेन? अहिले ओलिले घोषणा गरेको चुनाब पनि त्यस्तै हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा लोकतन्त्र र जनताको भावना लाई खिल्ली उडाउदै जनताको भावना माथी कुठाराघात गरेर मंचन गरिएका यस्ता चुनाबी नाटकहरुको कुनै अर्थ हुन्न ।
पुर्व एमालेहरु एकै ठाँउमा उभिनु पर्छ , भन्नेहरुको एउटा जमात छ भने स चिन्ह जता पर्छ त्यतै जानुपर्छ भन्ने अर्को जमात पनि देखिन्छ , यी दुई मध्ये तपाई चै कता ?
– म यो दुवै जमातमा छैन , म यस्तो अराजकनितिक चिन्तन भएको मान्छै नै होइन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । पहिलो कुरा नेकपा गठन भएपछि पुर्व एमाले वा पुर्व माओवादी भन्ने नै छैन र त्यस्तो हुन्न हामीले सहि र गलत लाई छुट्टाउनु पर्छ र सहि विचार र सहि कदमलाई साथ दिनु पर्छ । जहाँसम्म चुनाब चिन्हको कुरा छ त्यो निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ला कस्ले पाउने भनेर त्यो मुख्यकुरा होइन । मुख्यकुरा लोकतन्त्र , संविधान र अहिलेको ब्यबस्था हो । यत्रो रक्तरन्जित इतिहास भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भबिस्य नै अन्योलमा परेको बेलामा को पुर्व एमाले , सुर्य चिन्ह कता भन्नेकुरा सामान्य हो । म त्यस्तो प्राबिधिक कुरा लाई धेरै महत्त्व दिने भन्दा पनि अहिलेको यो गणतन्त्र संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा लाई महत्त्व दिन्छु र यो नै सहि हो भन्ने ठान्दछु।
उता खोटाङमा तपाईंको दाइ ओलि पक्षको जिल्ला अध्यक्ष भएपछि तपाईंपनि ओलि पक्षतिरै लाग्नु हुन्छ भनेर सामाजिक संजालमै टिप्पणी भैरहेको छ नि ?
– राम ,श्याम ,हरि कुनै पात्र कता गयो भन्नेकुराले मेरो राजनितिक जिवनमा कुनै अर्थ राख्दैन । मेरो राजनीतिक जिवनको निर्णय मैले गर्ने हो । सामाजिक संजालमा कस्ले के लेख्छ , कस्ले के भन्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । म बिगत देखि नै नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको पक्षको मान्छे हो । अहिलेको राजनीतिक संकटको निकाश भनेको नेकपाले नै दिने हो त्यो कुनै ओलि गुटले दिन सक्दैन भन्नेमा म स्पष्ट छु । यो मुलुकको राजनीतिक समस्याको निकास लोकतान्त्रिक विधि सम्मत तरिकाले खोज्नु पर्छ त्यस्को नेतृत्व प्रचण्ड – माधब नेपालले गरिरहनु भएको छ । म यो नेतृत्व प्रती पुर्ण रुपले बिस्वस्त छु ।
भनेपछि तपाई ओलि पक्षमा खुल्दै हुनुहुन्छ भनेर सामाजिक संजालमा आएका कुरा गलत हुन ?
– त्यो मेरो कल्पना बाहिरका कुरा हुन । त्यो कुनैपनि कोणबाट हेर्दापनि सहि होइन र हुनसक्दैन । म अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक ब्यबस्था, नागरिक सर्बोच्चता र गणतन्त्रका लागी लडेको मान्छे हो । म लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने ब्यक्ति भएकाले अलोकतान्त्रिक र गैरसंबैधानिक कदम लाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरै आउदैन । म सबै इटहरी नगरवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदिबहिनी हरु लाई यस्तो गलत हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दछु ।
बिहिबार, ०१ माघ, २०७७, बिहानको ११:५० बजे